१३ बैशाख २०७३, सोमबार २३:५२ 1,010
१३ बैशाख २०७३, सोमबार १२:५६ 2,435
मन्दिर, नेपाली मात्र हैन पूरा भारतवर्षको सभ्यताको सुरू बिन्दु यही हो। मन्दिरलाई कसैले हिन्दू देवी देवताको पूजा उपासनासँग मात्र जोडेर हेर्छ भने त्यो पूर्ण नहुन सक्छ। मन्दिर आस्था र विश्वासको प्रतिक मात्र नभएर मानव सभ्यताको पनि सूचक हो। पौराणिक भारतवर्ष अनि यतिखेरको एशिया र मध्यपूर्वको एउटा ठूलो हिस्साले बोकेको सभ्यताको एउटा महत्वपूर्ण बिन्दु हो मन्दिर। जहाँबाट हाम्रो दिन सुरू हुन्छ र अनि समाप्ति पनि। मन्दिर हाम्रो सभ्यता हो अनि आराधना र जिवनको एउटा स्कुलिङ।यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ जिवन देख्न बुझ्न अनि अनुभव गर्न सकिन्छ। काठमाण्डौंको पशुपतिनाथको मन्दिर पुगेका हरेकले यो अनुभव गरेको हुनुपर्छ। त्यसो त भारतका मन्दिर पुग्नेले पनि त्यस्तै अनुभव गर्छन्। मन्दिरमा पुगिसकेपछी मानिसको मन संलिन्छ, भगवानको डरै सही त्यसले मानिसलाई केही भएपनि सतमार्गमा लाग्न प्रेरितै गर्छ भलै मानिसहरू मन्दिरबाट निस्कन पाएको छैन निच काममा किन नलागुन। मन्दिरको वातावरणले मानसिक र मनोवैग्यानिक रूपमा मानिसलाई स्फुर्त बनाउँछ। त्यसैले मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्यका लागी पनि मन्दिर जानु आवश्यक हुन्छ। अष्ट्रेलिया जस्तो व्यस्त, व्यक्तिवादी अनि भौतिक समाजमा त मन्दिर र सतसंग अत्यावश्यक नै छ।
१२ बैशाख २०७३, आईतवार २३:०१ 7,439
यतिखेर अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अधिकांश एसाइनमेन्ट तयार गर्न अनि मिड-सेमेस्टर परिक्षा दिनमा व्यस्त छन्। यो समय नै एसाइनमेन्ट अनि परिक्षाको हो। सन् २०१६ को पहिलो सेमेस्टर यतिखेर आधा आधी भएको छ। कतिको यहाँको अध्ययन भरखर सुरू भएको होला त कतिको सकिने तरखरमा होला। एसाइनमेन्ट तयार पार्ने हतारोमा धेरै विद्यार्थीले त्यसको शुद्धता, शैली अनि त्यसमा अरूको विचार वा सामग्री प्रयोग अनि आफ्नो योगदान स्पष्ट छुट्याउँदैनन्। त्यसको त काम गरेर यूविभर्सिटीको फी तिर्नुपर्ने अनि घरमा पनि पैसा पठाउनु पर्ने दबाबका बीच एसाइनमेन्ट मिले र सकेसम्म कपि पेस्ट अनि प्याराफेज गरेर र नसक्ने नै छाँट आयो भने चैं किनेर पनि काम चलाउने अवस्था बन्छ। यसो गर्दा चलाख नहुने र आफ्नो क्षमता अनुसार वातावरण नबनाउने हो भने त्यसले विद्यार्थीको भिजा समेत क्यान्सिल हुने संभावना रहन्छ।पछिल्लो सात महिनामा मात्र अष्ट्रेलियामा ९,००० जति विदेशी विद्यार्थीको भिजा क्यान्सिल भएको समाचार आयो। धेरैको मन, मस्तिष्कमा यसले डर र कम्पन पनि पैदा गरयो। हरेक चौमास अनि वर्ष आउने यस्ता समाचार र तथ्यांकले तिनलाई बढी झट्का दिन्छ जो काम बढी पढाई कम गर्छन् अनि विश्वविद्यालयमा उपस्थीति र परिक्षामा राम्रो नतिजा हुँदैन। त्यसो त अष्ट्रेलियाको विद्यार्थी भिसा पाउँदा स्वीकार गरेका सर्तहरू पूरा नगरेको अवस्थामा पनि डर धेरै लाग्छ 'कतै इल्लिगल हुने त होईन?' पछिल्लो समय अष्ट्रेलियन दैनिक अखबार 'द अष्ट्रेलियन'मा प्रकाशित आलेखले एसाइनमेन्ट सही तरिकाले नगरेको कारण विद्यार्थीहरूको भिजा क्यान्सिल भएको उल्लेख गरेको छ। ईण्डियनसाइटडटकमडटएयूले प्रकाशन गरेको समाचार अनुसार पाकिस्तानबाट अष्ट्रेलिया पढ्न आएका एक विद्यार्थीको भिजा अष्ट्रेलियन अध्यागमन तथा सिमा सुरक्षा विभागले एसाइनमेन्टको कारण नै खारेज गरिदिएको छ। 'प्लेजरिज्म' अर्थात बौद्धिक चोरीको कारण देखाएर अष्ट्रेलियन अध्यागमन तथा सिमा सुरक्षा विभागले पाकिस्तानी विद्यार्थी शाहियार खानको विद्यार्थी भिजा खारेज गरेको हो। मेलबर्नको 'टेक्निकल एजुकेसन डेभलोपमेन्ट ईन्स्टिट्युट'मा अध्ययनरत उनले आफ्नो एसाइनमेन्टहरू ईन्टरनेटमा उपलब्ध सामग्रीहरू सारेर तयार पारेका थिए। उनले एसाइनमेन्टहरूमा अरूले तयार पारेको सामग्रीहरू हुबहु सारेर बुझाएकोअष्ट्रेलियन अध्यागमन तथा सिमा सुरक्षा विभागले जनाएको द अष्ट्रेलियनको आलेखमा उल्लेख छ। अनुसन्धान तथा अध्ययनमा प्रयोग भएका सामग्रीको स्रोत उल्लेख गर्न समेत खान चुकेका थिए। अरूको लेख तथा विचारलाई सारेर आफ्नो दाबी गर्नुलाई बौद्दिक चोरी (प्लेजरिज्म) मानिन्छ।
३ बैशाख २०७३, शुक्रबार १०:३८ 1,929
यो आलेख प्रबद्धनात्मक हो ! आलेखमा उल्लेखित व्यवसायका लागी नेपालीपेज विज्ञापन साझेदार हो सन्तान सुख, संसारमा नारी र पुरूष दुवैले अनुभव गर्ने सुखहरूमा सर्वोत्तम सुख यही नै हो। भरखर भरखर बाबु आमा बनेकालाई थाहा र अनुभव हुन्छ कस्तो हुन्छ दोस्रो पुस्ता संसारमा आउँदाको खुसी अनि मानसिकता। ‘साउँको भन्दा ब्याजको माया’ …
२ बैशाख २०७३, बिहीबार १४:१४ 2,530
माइग्रेसन, अर्थात बसाईं सराईं। यो मानिसको आदीकाल देखीको आवश्यकता अनि प्रक्रिया हो। आदीमकालमा मानिसहरू फिरन्ते प्रकृतिका थिए। कृषि युगमा आएपछी मात्र मानिसले खेती गर्ने र घरबास बाँध्न सुरू गरेका हुन्। औधोगिक कालमा आएपछी भने सुख, सुविधा र आय आर्जनको बाटो हेरेर शहरीकरण र आवाशिय विकास हुन थालेको हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापारको विकासले मानिसले शहर, बजार अनि डाउनटाउन र सिबिडीको कन्सेप्ट विकास गरयो। पछिल्ला युगमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय बजार, बाणिज्य अनि अर्थतन्रको विकासले हामी पूर्ण रूपमा विश्वग्राम अर्थात ग्लोबल भिलेजको रूपमा रूपान्तरण भइसकेका छौं। कुनै पनि देशको रक्षा, विकास अनि अर्थ र राजनीतिक व्यवस्था यतिखेर सबै विश्वकै साझा चासोको भएका छन्। अनि हामी नागरिक आफैमा ग्लोबल सिटिजन (ग्लोबल सिक) भइसकेका छौं। त्यसलै त जता अवसर छ उतै सर्छौं बसाईं। ईमिग्रेन्ट, माईग्रेन्ट वा पलायनवादी जे भने पनि यो सब अवसरले डोरयाएको यात्रा हो। हामी सामान्य मानिस त आफ्नो सिप र क्षमताले गरिखाने भनेर संसारका विभिन्न देशका सिमा नाघेर हिंड्छौं भने व्यापार गर्ने व्यापारीको त कुरै नगरे हुन्छ। दुईचार पैसा जता धेरै हुन्छ त्यतै लाग्नु व्यापारीको धर्म नै हो।‘मिलेनियर’, ‘मिलेनायर’ जे भने पनि धनी अनि करोड र अर्बका पतिहरू अवसरवादी हुन्छन्। हामी सामान्य नागरिक भन्दा त लाख चलाख। अवसर कता छ भन्ने पहिले आँकलन गरेर त्यसै अनुसारको व्यवहार गर्छन्। नेपालका धनाढ्य चौधरी चाचा देखी खेतान अंकल सम्मलाई नै हेर्नुस न। अनि एनआरएन भनेर छिरेका महतो अंकलको ट्याक्स हेभनको पैसा र एनसेलले छलेको कर नबिर्सनुस् नि। अन्तर्राष्ट्रिय वेपारीको त नकुरा गरम। पछील्लो न्यू वर्ड वेल्थ नामक रिपोर्टले सन् २०१५ मा विश्वका धनिमानिसहरू, उही के मिलेनायर कता कता बसाईं सरे, कुन देशबाट निस्के कुन देशमा छिरे भन्ने फेरिहस्त सार्वजनिक गरेको छ। जसले अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, इजरायल, युएई र न्यूजिल्याण्डलाई धनीहरूले रुचाएको देशका रूपमा देखाएको छ।
३० चैत्र २०७२, मंगलवार २३:१० 1,103
२५ चैत्र २०७२, बिहीबार १५:३० 3,001
२३ चैत्र २०७२, मंगलवार १०:४४ 25,472
२१ चैत्र २०७२, आईतवार १८:४६ 915
२१ चैत्र २०७२, आईतवार १६:३८ 2,087
पक्कै पनि घडीको समय मिलाईसक्नु भयो। आज अप्रिल ३ गते आईतबार विहानबाट अष्ट्रेलियाका राज्यहरू न्यूसाउथवेल्स, भिक्टोरिया, तासमानिया, साउथ अष्ट्रेलिया र अष्ट्रेलियन क्यापिटल टेरिटरीमा विहानबाट ‘डेलाइट सेभिङ टाइम’ समाप्त भएको छ। आज विहान ३ बजे घडिको घण्टा सुई फेरी दुईमा लैजानुपर्थ्यो। घरमा घडी भएकाले हिजो सुत्नु अघि वा आज उठेपछी समय मिलाउनु नै भयो होला। कसैले मिलाउन विर्सेको भए आज त पक्कै मिलाउनु हुन्छ किनभने भोली सोमबार देखी काममा जानु छ अनि मोबाईलमा समय १ घण्टा अघि भइसक्यो।अष्ट्रेलिया लगायत विश्वका कतिपय मुलुकले हरेक वर्ष डेलाइट सेभिङ टाईम भनेर केही मिनेट वा घण्टा घडीको समयलाई एडजस्ट गर्छन्। किनभने ती देश र भूभागमा घाम छिटो वा ढीलो उदाउँछ। अष्ट्रेलियामा आज घडीको समय मिलाउनु भयो भनेसी यसको मतलब हो आजबाट घाम यी राज्यमा १ घण्टा जतिसमय छिटो लाग्छ। खासमा यो घामसँगै समय मिलाउने काम सुरू भएको धेरै लामो समय भइसकेको छ। यससँग देशको अर्थतन्त्र, मानिसको काम गर्ने क्षमता साथै तपाईं हाम्रो स्वास्थ्य समेत जोडिएको छ।
२० चैत्र २०७२, शनिबार १७:२० 30,885
२० चैत्र २०७२, शनिबार ००:५२ 6,326
१९ चैत्र २०७२, शुक्रबार २१:३५ 1,528
अंग्रेजी क्यालेन्डरको अप्रिल महिनाको १ गतेलाई 'अप्रिल फुल' अर्थात् मूर्ख दिवसको रुपमा मनाउने चलन छ। पश्चिमा देशहरुमा यो दिन उटुँगा उटुँगा कामहरु गरेर आफ्ना आफन्त, साथीभाईलाई उल्लु बनाएर मजा लिइन्छ। अप्रिल फुलको मज्जा त्यतिबेला सम्म रहन्छ जतिबेला सम्म आफू नै उल्लु बनेको थाहा हुँदैन। आफूलाई अरुले उल्लु बनाएको पत्तो चलेपछि भने यसमा त्यति धेरै मजा आउँदैन। तर पनि यो झुक्याउने खेल र परम्परा निक्कै सहभागीतामुलक र रमाइलो छ। आजकल त प्रयांकको नामबाट वर्ष भर नै झुक्याउने खेल चलिरहेको हुन्छ। त्यसखालका गतिविधि फिल्ममा उतारेर यूट्युब च्यानलबाट वर्ष भर नै प्रशारण भइरहेको हुन्छ। यो एउटा कलाको विधाका रुपमा नै स्थापित भएको छ आजकल।यो झुक्याउने खेल खेल्ने चलन पश्चिम तिरको भएपनि पूर्विय संस्कारका नेपाल र भारतमा समेत 'अप्रिल फुल' भन्दै मानिसहरुलाई झुक्याउने वा अफवाह फैल्याउने काम वाषिर्क परम्परा नै बनेको छ। नेपालीहरु इतिहास देखी नै सोझा मानिन्छन् वर्तमानको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रलाई बिर्सने हो भने आम नेपाली गाई जस्तै सोधा र सुधा छन्। छक्का पञ्जा जानेका छैनन्। गाउँ तहमा यो अप्रिल फुल नपुगे पनि शहरमा भने युवाहरु साथीभाईलाई झुक्याउने खेल खेलेर अप्रिल फुल मनाउँछन्। जुन सबै मजाक र रमाइलोको लागि हो र त्यसमा मात्र सिमित रहँदा मजा नै हुन्छ। नेपालमा पनि अप्रिल फुल मनाउने चलन स्थापित नै भएको छ यतिखेर। विशेष गरेर अंग्रेजी दैनिक दि हिमालयन टाइम्स र लोकप्रिय ब्लग माइसन्सारले 'अप्रिल फुल'मा मानिसले सजिलै पत्तो नपाउने सामग्री बनाउँछन् हरेक वर्ष माइसन्सारले बनाएको अप्रिल फुल सामग्रीलाई साँच्चै मानेर कतिपय दैनिक र समाचार पोर्टलले महत्वको समाचार नै बनाएका पनि थिए।अष्ट्रेलियाका बासिन्दाको लागि त यो रौनक र मस्तीले भरिएको अवसर नै भइहाल्यो। अप्रिलको पहिलो दिन नै साथीभाईलाई 'फुल' बनाउनका लागि करिब एकसाता जतिको तयारी नै पो हुन्छ। त्यसो त ठूला कर्पोरेट हाउस देखी सेना प्रहरी जस्ता राज्यका अंगहरुले पनि अप्रिल फुल मनाउन राम्रै तयारी गरेका हुन्छन्।
१८ चैत्र २०७२, बिहीबार १२:०१ 6,967
मानिस वास्तवमा जिवनको खोजमा आफ्नो घर, परिवार, समाज, सम्प्रदाय अनि देशको घेराबाट बाहिर निस्कन्छ। मानिसको यो यात्रा सुख, शान्ति अनि प्रगतिको लागि हो। आजको युगमा जुन देशमा आफ्नो ज्ञान, सीप, योग्यता, कुशलताको सम्मान हुन्छ अनि अवसरहरु मिल्छन् मानिसले त्यहीँ आफ्नो डेरा लगाउँछ। माइग्रेसनको सामान्य सिद्धान्त त्यही हो। स्वास्थ्य सुविधाको सहज उपलब्धता एवं शिक्षा र रोजगारीको उपलब्धताका कारण आरामदायी जिवन धेरै नेपालीहरुलाई अष्ट्रेलियाले आकर्षा गर्ने कारण यही नै हो।पछिल्लो १० वर्षमा अष्ट्रेलिया आउने र यहीँ बसोबास गर्ने नेपालीको संख्या बढ्नुको कारण पनि यही हो। विधिको शासन, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली, रोजगारीको सहज उपलब्धता अनि विश्वव्यापी अवसर यही कारण हो विश्वका धेरै देशबाट मानिसहरु अष्ट्रेलिया ओइरने। त्यसमा पनि यो देशले क्षमता भएका विश्वका जो कोहीलाई पनि यहाँ बस्न र काम गर्न दिन्छ, भलै केही प्रक्रिया भने पुरयाउनु चैं पर्छ। अष्ट्रेलियाको स्किल्ड माइग्रेसन प्रोग्राम अर्न्तगत विश्वभरबाट यहाँ पढ्न आउने र परमानेन्ट रेसिडेन्सी (पीआर) लिएर बस्नेहरुको सँख्या उल्लेख्य हुँदै जाँदा नेपालीको पनि संख्या बढेको छ।
१८ चैत्र २०७२, बिहीबार ०८:३७ 12,334
१७ चैत्र २०७२, बुधबार १३:४७ 12,914
१६ चैत्र २०७२, मंगलवार ००:०९ 4,271
१४ चैत्र २०७२, आईतवार २१:३४ 2,079
१४ चैत्र २०७२, आईतवार ०१:०९ 3,242
६ भाद्र २०७२, आईतवार २३:०९ 47,387